A na-eji ihe eji emechi ihe na otu ihe eji arụ ọrụ ya na - eji ya eme ihe n'ime ụgbọ niile site na ogwe ngwaọrụ ruo na consoles etiti ruo na ọnụ ụzọ. Anyị nwere ahụmịhe dị ukwuu na-arụ ọrụ na ngwa eji arụ ọrụ n'ime ụlọ. Mmekorita ya na CHE maka inye aka na nnwale ngwa, ihe nlere, ihe onye isi, udiri ugboala, ibu mwepu ma hota onye na ejidere aka nri iji nweta iru oru ị choro n’ime ngwa nke ozo.
Na CHE, anyị na ndị ahịa anyị na-enwu ọkụ na-arụkọ ọrụ na iji zụlite usoro nkwado dị iche iche eji arụ ọrụ ngwa ngwa dịka eri na-ejikọ ihe eji emechi ihe, eriri isi jikọtara ọnụ, ntinye aka na bọọlụ bọọlụ. Mmekorita ya na CHE maka enyemaka maka inyocha ngwa, ihe nlere, ihe eji eme ngwa nri iji nweta iru oru ị choro na ngwa nke ozo.
Anyị na-eji usoro oyi anyị, igwe na nke mgbakọ iji kwado ndị ahịa powertrain na ngwa ha na-achọ. CHE meputara akụrụngwa ejiri na sistemụ nkwado igwe, nnyefe, ọdịiche dị n'azụ na ngwa driveline.